‘दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित रहने प्रयास गरेका छौँ’ - BBC News नेपाली
‘दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित रहने प्रयास गरेका छौँ’
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसंग
हाल ब्रिटेनको भ्रमणमा रहेका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसंग लण्डनमा हाम्रा साथी भगीरथ योगीले कुराकानी गरेका थिए। अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
ब्रिटेन भ्रमणको क्रममा तपाईंको भेटघाट र छलफल के मा केन्द्रित थियो?
विगतमा ब्रिटेनको सेनाले नेपाली सेनालाई दिएका विभिन्न सैनिक सहयोग सम्बन्धी कुराहरुमा विचार विमर्शहरु भयो। र विशेष तालिमहरु, जुन हामीले यहाँ गरिराखेका छौं त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि कुराकानी भयो। केही हदसम्म ब्रिटिश सेनाका व्यक्तिहरु नेपाली सेनामा आएर तालिम गर्ने क्रम विगतमा पनि थियो। त्यसलाई उनीहरुले निरन्तरता दिउन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो त्यो विषयमा पनि केही छलफल भयो। हाम्रो केही क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा ब्रिटेनको सेनाले विगतमा नेपाली सेनालाई मद्दत गरेको थियो। त्यो क्रमलाई फेरि जोड्ने दिशामा पनि केही कुराहरु भए।
झण्डै चारवर्ष अघि महासेनानी कुमार लामा पक्राउ परेको प्रकरण र भूकम्प पछि ब्रिटिश सरकारले पठाएका तीनवटा हेलिकप्टर नेपाल पुग्नै नपाएर फर्केर आएको घटनाले गर्दा दुई देशका सेनाबीच सम्बन्ध अलिकति चिसिएको थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि सामान्यीकरण तर्फ अघि बढ्न लागेको हो कि ?
त्यो कुमार लामा प्रकरणको करिब करिब अन्त्य भइसकेको छ। त्यसमा हामीलाई केही असहज पक्कै पनि भयो। बहालवाला कर्णेल यहाँ आएर पक्राउ पर्नु, त्यसमा (ब्रिटिश) सेनाको प्रत्यक्ष हात थिएन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भूकम्पमा चिनुक हेलिकप्टरको कुरा थियो, केही असमझदारी त्यहाँ अवश्य पनि भएको छ। भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यस किसिमको उच्चस्तरीय भ्रमणले त्यो हामीबीच रहेको असमझदारीलाई सम्बोधन गर्न केही मदत पुर्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।
अलिकति फरक प्रसंगमा कुरा गरौं। केही समय यता नेपालको अखण्डतामाथि खतरा उत्पन्न हुने संकेतहरु देखिएका छन् भनेर तपाईंले भन्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको टिप्पणी के कारणले गर्नु भयो? नेपाली सेनाको दृष्टिकोण के हो?
अब संविधानले नेपाली सेनालाई देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रिय एकताको सम्वर्द्धन गर्ने विशिष्ट जिम्मेवारी स्पष्टरुपले तोकेको छ। केही समययता केही तत्वहरुले निश्चय पनि यहाँ सबैलाई थाहा नै छ कि विखण्डनका आवाजहरु उठ्न थालेको देखिन्छ। हामीले त्यही कुरालाई जोड दिएका हौं। राजनीतिक समस्याहरु राजनीतिक तवरमा नै समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता हो।तर यदि त्यस्तो किसिमको समस्याले देशलाई विखण्डनको बाटोमा डोर्याउँछ भने या राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने किसिमका आवाजहरु उठ्न थाल्छन् भने त्यो अवश्य पनि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि सह्य कुरा होइन। हामीले त्यो कुरा उठाएको हो। यदि त्यो समस्या त्यो दिशामा मोडियो भने त हामी संविधानसम्मत रुपले नै अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले बेलाबखतमा भन्ने गरेको हो।
त्यसमा नेपाल सरकारले अह्राएपछि नेपाली सेनाले त्यो अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा हुन्छ कि नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिका हुन्छ?
संविधानसम्मत भन्नासाथ प्रक्रियागत रुपमा हामी अघि बढ्छौं।
झण्डै दुई वर्ष अघि नेपाल-भारत सीमामा जुन अवरोध भयो, त्यसपछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्नमा नेपाली सेनाको प्रमुखको रुपमा तपाईंको भूमिका रह्यो भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि?
त्यसमा धेरै बताइराख्ने के छ र त्यो पुरानो भइसक्यो। फेरि त्यो कुरामा त्यति प्रवेश गर्न उचित नहोला। तैपनि त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वद्वारा जुन समस्या समाधान गर्न विभिन्न बाटोहरु अपनाइए, त्यसमा सैनिक कूटनीतिको माध्यम पनि एउटा पर्थ्यो। राजनीतिक निर्देशनकै आधारमा हामीले केही प्रयास सैनिक कूटनीतिको माध्यमबाट गरेका थियौं र त्यसले स्थितिलाई सहज तुल्याउन केही मदत गरेको हो कि भन्ने लाग्दछ।
Image caption नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिहरु एक अर्काको देशको सेनाका मानार्थ प्रमुख रहने प्रचलन छ
तपाईले व्यक्तिगत रुपमा भारतीय सेनाध्यक्षसंग जुन किसिमको पहल गर्नुभयो, त्यसले सहयोग ग-यो भन्न खोज्नुभएको हो?
सेना र त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय लगायतले त्यसबाट सुरक्षामा पर्ने संभावित प्रभावबारे जुन छलफल हामीसंग भएको थियो, त्यसलाई उनीहरुले पनि गम्भीरताका साथ लिएका थिए।
अहिले आएर भारत र चीनबीच केहि तनाव बढेको देखिराखेको छ। चीनसंग पहिलो पटक गत बैशाखमा सैनिक अभ्यास गर्ने भनिएको थियो पछि त्यो तालिम मात्र हुन सक्यो। यसमा भारत सरकारबाट दबाब आयो भन्ने कुरा पनि थियो। यसमा के भएको हो?
त्यो भनाइमा कुनै सत्यता छैन। हामीले एउटा शुरुवात चीनको सेनासंग पनि भविष्यमा (इन्टरअपरेबलिटी) सैनिक समूहहरुको एकसाथ काम गर्न सक्ने क्षमता लगायत विभिन्न कुरामा फाइदा पुग्ने हिसावमा सुरु भएको हो। भूकम्पमा उनीहरुले जुन किसिमले मद्दत गरे त्यो हिसाबले भविष्यमा पनि संगै काम गर्नु पर्ने अवस्था आइपर्नसक्छ खास गरी मानवीय सहायता र विपतको बेला उद्धार वा आतंकवाद विरुद्ध अपरेशन भन्ने विचारले शुरुवात चाहि हामीले सानो स्तरमै गरौं भनेर शुरुमा छलफल जुन लाइनमा भएको थियो त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यही तहमा भयो। तर त्यसलाई केही पत्रपत्रिकाले अलि बढाइ चढाइ अभ्यास, तालिम आदि भने। तर हामीले गर्न खोजेको जे हो त्यही चाहिँ गर्यौ।
दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी मुलुकसंग सन्तुलन मिलाउन नेपाली सेनालाई बीचबीचमा अलि गाह्रो पनि पर्ने गर्छ? कि कस्तो स्थिति हुन्छ?
हामीले दुवैतर्फ आफ्नै हिसाबले एउटा सम्बन्ध राखेका छौं। अहिलेको समयमा हामीले शान्ति सेनाहरुमा पनि दुवै राष्ट्रमात्र होइन कि दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र र विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुसंग पनि काँधमा काँध मिलाएर काम गरेकै छौं। अफ्रिकाका धेरै जसो मिशनहरुमा, चीन, भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेश हामी सबैसंगै नै छौं। त्यसलाई सन्तुलित तुल्याउन हामीले प्रयास गरेका छौं। हाम्रो तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नआओस भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट छौ। हाम्रो भूमि हाम्रो छिमेकी विरुद्ध प्रयोग नहोस् अथवा हाम्रो कारणले छिमेकीको सुरक्षा स्वार्थ आघात नपुगोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौ।
Image caption चिनियाँ सेनाका प्रमुखले हालै नेपालको भ्रमण गरेका थिए
त्यसको लागि गएको केही समय देखि राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिएको छ। नौ, नौ महिनामा सरकार बदलिने गर्दा जुन किसिमले उनीहरुको सुरक्षा हित हेर्नुपर्ने हो त्यो नेपालले गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरुले ठानेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका अरु बलियो भएर आएको देख्नु हुन्छ कि?
राजनीतिक संयन्त्र बलियो भयो भने सेना पनि बलियो हुने हो। र हामीले सुरक्षित र स्थिर वातावरण कायम गर्न केहि न केहि आन्तरिक रुपमा योगदान गरेका छौं। र, अघि मैले भने जस्तो हाम्रो कारणले छिमेकीको सुरक्षा स्वार्थमा आघात नपरोस् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै सचेत छौं। त्यो अनुसारले हामीले केही सैनिक गतिविधिहरु पनि गरिरहेका छौं। बाहिरी अभ्यास त्यो त्यसैको एउटा पाटो हो। हामीले भारतसंग सबैभन्दा ठूलो स्तरको 'सूर्यकिरण' भन्ने अभ्यास गर्छौ (बटालियन स्तरको) भने अमेरिकासंग पनि 'ब्यालेन्स नेल' भन्ने हरेक वर्ष अभ्यास भईराखेकै हुन्छ। चीनसंग यो सुरुवात हो। श्रीलंकामा पनि हामीले सानो अभ्यासमा भाग लिएका थियौं।यो सेनाको व्यावसायिकता बढाउने एउटा माध्यम हो भने केही न केही हाम्रा सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम पनि हो।